U-Elvira Will Haunt Hulu For 13 Nights - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo U-Elvira Will Haunt Hulu Amalanga ayi-13
U-Elvira Will Haunt Hulu Amalanga ayi-13
ebhalwe ngu admin October 4, 2014
Kulabo kini abaphuthelwa yinkazimulo (noma kufanele ngithi izinsuku ezi-gory) zababungazi abesabekayo, njengase-USA Hlala ubusuku bonke noma ama-TNT Monstervision noJoe Bob Briggs, sinezindaba ezimnandi.
Akumangazi ukuthi u-Elvira (osabukeka emuhle kakhulu) uyintokazi ematasa eza ngo-Okthoba. Kumenyezelwe ekuqaleni ngomhlaka Wethuke Uze Uwe, kusukela ku 19th, uMistress of Horror uzobe ephethe okusha 13 Ubusuku buka-Elvira, isakaza kuphela ku-Hulu! Yize ishejuli ephelele ingatholakali ngalesi sikhathi, u-Elvira uzothatha amanye ama-b-movie amahle futhi amabi afana nawo Abesifazane Abadla Abantu Ehlathini Lokotapeya Lokufa, Ububi Obubi, Abantu Bembewu, futhi AmaShrunken Heads, okuzoholela ekwakheni kwe-Romero Ubusuku babaPhilayo abaFileyo nge-Halloween.
Umethuli wezinhlelo naye uqobo uzoba nama-intro kumafilimu futhi uzophinde angene ngezikhathi ezithile ukunikeza ukuqonda okuhlekisayo.
13 Ubusuku buka-ElviraElviraUbubi BongHuluubusuku babafileyo abaphilayoImbewu Abantu
I-Zombie-A-Go-Go: Okhethekile kweRob Zombie Halloween Okushintshe Impilo Yami
Ama-movie amahle kakhulu wesidalwa